Huawei Y9 Prime 2019 na-anata EMUI 9.1 | Gam akporosis
Huawei Y9 Prime 2019 na-anata EMUI 9.1
Na Mee nke afọ a, Huawei kwalitere Y9 Prime 2019, a ngwaọrụ na-eji nke Kirin 710, Sistemụ-on-Chip nke ga-enwe ike izu ike site n'oge ruo n'oge ekele maka ọbịbịa nke onye nọchiri ya, bụ Kirin 810. Ọnụ a, dị ka onye nhazi ya si kwuo, na-abịa na njirimara dị n'etiti. Ọzọkwa, a tọhapụrụ ya na EMUI 9 nhazi mkpuchi n'okpuru gam akporo Pie.
La EMUI mbipute 9.1 Ọ dịlarịrị ọtụtụ ọnwa. Agbanyeghị, ndị izizi nabatara ya bụ ama nke ọkwa kacha elu nke akara a. Ngwaọrụ ndị ọzọ ejirila nke nta nke nta nweta ya, ugbu a, nke ọhụrụ nke na - egosi ya bụ ekwentị a, Y9 Prime 2019.
Ekwuwapụtara ama ama a maka ahịa ndị India naanị otu izu gara aga. Mgbe nke ahụ gasịrị, maka awa ole na ole, akụkọ ndị na-ekpughe na ngwungwu ngwa ngwa ahụ na-agbasa na mba ahụ apụtaghị na enweghị ha. Ọ bụ ezie na ọ dị naanị ebe ahụ, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-adị na mba na ókèala ndị ọzọ; ọ bụ naanị oge tupu ọ malite itinye ya na mpaghara ndị ọzọ. Cheta na a na-enyekarị OTA nwayọ nwayọ na, dị ka anyị si hụ, nke a abụghị otu.
EMUI 9.1 nwere ọrụ na njirimara dịka GPU Turbo 3.0 na EROFS ọhụrụ (Extendable Gụọ-Nanị Njikwa sistemụ) sistemụ faịlụ na-enye ohere ngwa ọdịnala Ibu Ibu ngwa ngwa. Nke ikpeazụ a nọchiri faịlụ faịlụ F2FS ma weta mmụba 20% na ọsọ ọgụgụ agụ na ọbụnadị hapụ gị ohere na ngwaọrụ gị.
Huawei Y9 Prime 2019 na-abịa na ihuenyo LCD 6.59 nke anụ ọhịa ahụ na mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080, Kirin 710 chipset ahụ e kwuru na mbụ, 4 GB Ram, ebe nchekwa 64/128 GB na batrị 4,000. ebubo site n'ọdụ ụgbọ mmiri USB-C nke ọ na-ebu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei Y9 Prime 2019 na-anata EMUI 9.1
Xiaomi Mi 9 5G ka akwadoro maka ahia
Galaxy Note 10 na Rịba ama 10 +: Samsung ọhụụ dị elu